आजदेखि कोभिड–१९ को दैनिक प्रेस ब्रिफिङ नहुने
जनता भ्वाइस calendar_today १३ कार्तिक २०७७, 3:53 am
कात्तिक १३ काठमाडौं ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अब कोभिड–१९ को दैनिक प्रेस ब्रिफिङ नगर्ने भएको छ ।
दसैँको समयमा केही दिन रोकिएको प्रेस ब्रिफिङ बुधबार भएको थियो । आज बिहीबारदेखि भने दैनिक ब्रिफिङ नहुने मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अब सातामा दुई दिन आइतबार र बुधबार कोभिड-१९ प्रेस ब्रिफिङ हुनेछ । अरु दिनको सूचना मन्त्रालयको वेबसाइट, भाइबर ग्रुप र सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिइने उनले बताए ।